Psalmen 84 HTB - Nnwom 84 ASCB
1Ao Asafo Awurade,
wʼatenaeɛ hɔ yɛ ahomeka!
2Me kra pere, mpo ɛtɔ piti,
sɛ ɔbɛkɔ Awurade adihɔ;
mʼakoma ne me honam team
frɛ Onyankopɔn ɔteasefoɔ.
3Mpo akasanoma anya fie,
na asomfena nso anwono ne pirebuo,
baabi a ɔbɛhwane ne mma
wɔ beaeɛ bi a ɛbɛn wʼafɔrebukyia,
Ao Asafo Awurade, me Ɔhene ne me Onyankopɔn.
4Nhyira nka wɔn a wɔte wo fie;
na wɔde wɔn akoma hyɛ akwantuo ase kɔhwehwɛ wo.
6Sɛ wɔfa Baka Bɔnhwa no mu a,
osutɔberɛ nsuo nso de nhyira pii kata asase no so.
7Wɔkɔ no ahoɔden so berɛ nyinaa,
kɔsi sɛ wɔn mu biara bɛpue Onyankopɔn anim wɔ Sion.
8Ao Asafo Awurade, Onyankopɔn tie me mpaeɛbɔ;
Ao Yakob Onyankopɔn, yɛ aso ma me.
9Ao Onyankopɔn, hwɛ yɛn akokyɛm;
fa ahummɔborɔ hwɛ deɛ woasra no ngo no.
10Wʼadihɔ hɔ da korɔ tena
yɛ sene nnafua apem wɔ baabi foforɔ;
mepɛ sɛ mɛyɛ ɔpono ano hwɛfoɔ wɔ Onyankopɔn fie
sene sɛ mɛtena amumuyɛfoɔ ntomadan mu.
11Ɛfiri sɛ Awurade Onyankopɔn yɛ owia ne ɛkyɛm;
Awurade hunu mmɔbɔ na ɔhyɛ animuonyam;
ɔremfa ade pa biara nkame
wɔn a wɔteneɛ.
12Ao Asafo Awurade,
ASCB : Nnwom 84